Madaxweynaha Jubbaland oo ka hadlay fashilka shirka Dhuusamareeb kuna eedeeyay MD Farmaajo | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Madaxweynaha Jubbaland oo ka hadlay fashilka shirka Dhuusamareeb kuna eedeeyay MD Farmaajo
Madaxweynaha Jubbaland oo ka hadlay fashilka shirka Dhuusamareeb kuna eedeeyay MD Farmaajo
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ka hadlay Shirkii Madaxda dowladda Federaalka, kuwa maamul Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir uga socday Dhuusamareeb ee natiijo la’aanta ku dhammaaday.
Madaxweyne Axmed Madoobe oo ku dheeraaday ka hadalka caqabadaha heystay Jubbaland ayaa waxaa uu sheegay in Shirkii Madaxda uu uga qayb galay ujeed ah in xal laga gaaro khilaafka hareeyay qabsoomida doorashada dalka Soomaaliya ka dhaceysa, iyadoo weliba Gobolka Gedo ay dagaalo ka dhaceen.
Waxaa uu sheegay in Shirka inta uu socday dood adeg laga yeeshay saddex qodob oo la isku haayay, kuwaasi oo kala ahaa arrinta Gobolka Gedo, Guddiyada la magacaabay iyo arrinta Xildhibaanada Gobollada Waqooyi ee Somaliland, kuwaasi oo uu rajeeynayay in xal laga gaaro doono, balse lagu kala tegay markii dambe.
Madaxweyne Jubbaland ayaa Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku eedeeyay in uusan diyaar u aheyn in xal laga gaaro arrinta Gobolka Gedo, isagoona sheegay, in Madaxweyne Farmaajo diiday in Jubbaland lagu wareejiyo Maamulka Gobolka Gedo.
“Madaxweyne Farmaajo wuxuu isku koobay sheegashada hal degmo iyo hal gobol oo kuraas taallo, wuxuuna diidday in maamulka Gedo nagu soo wareejiyo, sidaas ayuu u fashilmay shirkii” ayuu yiri Madaxweyne Axmed Madoobe oo xusay inuu ka xun yahay dagaalkii ka dhacay degmada Balad-xaawo ee Gobolka.
Dhinaca kale Madaxweyne Axmed Madoobe ayaa ka hadlay eedeyntii xalay Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Cismaan Dubbe u jeediyay Maamulka Jubbaland oo uu sheegay inuu Shirkii Dhuusamareeb ka socon waayay, wuxuuna Axmed Madoobe sheegay in hadalkaas uusan aheyn inuu ku hadlo qof Mas’uul ah oo xil haaya.
Si kastaba hadalka Madaxweynaha Jubbaland ayaa waxaa uu kusoo aadaya, iyada oo fashil kusoo dhammaaday Shirkii Madaxda dowladda Federaalka, kuwa maamul Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir uga socday Magaalada Dhuusamareeb, isla markaana lagu kala tegay Shirkaas oo isha lagu haayay natiijada kasoo bixi laheyd.
Previous articleDHAGEYSO:Raila Odinga oo maalintii labaad ku sugan ismaamulka Turkana
Next articleDHAGEYSO:Dhallinyaro waday olole dhiig arruurin ah oo shir ku qabtay isbitaalka weyn ee Garissa